Olee Ihe M Ga-eme Ka Mmekọ Nwoke na Nwaanyị Ghara Ịna-abata M n’Obi? | Ndị Na-eto Eto
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikongo Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndau Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Umbundu Urhobo Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Olee Ihe M Ga-eme Ka Mmekọ Nwoke na Nwaanyị Ghara Ịna-abata M n’Obi?
Kpachapụ anya n’ụdị ndị gị na ha na-akpa. Ọ bụrụ na ndị enyi gị na ụmụ klas unu ana-ekwu okwu iberiibe, esokwala ha. I soro ha, ọ ga-eme ka o siere gị ike iwepụ ihe gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị n’obi gị. Ha kpawa ụdị nkata ahụ, i nwere ike jiri akọ pụọ n’emeghị ka ị̀ bụ onye oké ezi omume. Meekwa ya otú ha na-agaghị akọwa gị ọnụ.
Ị̀ ga-ekwe ka e tinye nsí ná nri ị na-eri? Ọ bụrụ na ị gaghị ekwe, olee uru ọ bara ikponye ihe rụrụ arụ n’uche gị?
Ejikwala ihe iberiibe atụrụ ndụ. Ọtụtụ ihe a na-emepụtara ndị mmadụ ka ha jiri na-atụrụ ndụ taa na-eme ka agụụ mmekọ nwoke na nwaanyị na-agụ ha. Ma, olee ihe Baịbụl gwara anyị? Ọ sịrị: “ Ka anyị sachapụ onwe anyị mmerụ niile nke anụ ahụ́ na nke mmụọ, wee mee ka ịdị nsọ anyị zuo oké n’egwu Chineke. ” (2 Ndị Kọrịnt 7:1) Ejikwala ihe ọ bụla ga-eme ka mmekọ nwoke na nwaanyị gụwa gị na-atụrụ ndụ.
Cheta na agụụ mmekọahụ ịgụ mmadụ abụghị ihe ọjọọ. A sịdị kwuwe, ọ bụ Chineke kere nwoke na nwaanyị ka ha na-enwe mmasị n’ebe ibe ha nọ. Ọ bụ ya mere na ọ bụghị ihe ọjọọ ma di na nwunye na-enwe mmekọahụ. N’ihi ya, ọ bụrụ na agụụ mmekọahụ na-agụsi gị ike, echekwala na ị bụ onye ọjọọ ma ọ bụkwanụ na ị gaghị emeli ihe dị mma.
Nke bụ́ eziokwu bụ na ihe ị chọrọ ka ọ dị gị n’obi bụ ihe ga-adị gị n’obi. Ị chọọ, ị ga-emeli ka ihe ọjọọ ghara ịna-abata gị n’obi, ị ga-akpalikwa àgwà ọma.